Khasaaro ka dhashay Xaruun caruurta lagu xanaaneeyo oo la duqeeyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
dhimashada ayaa lasheegey in kor udhaaftey ilaal 80 ruux halma dhaawacna aan weli la heynin tiro dhab ah sida dadka deegaanka aya sheegayaan.
ilo wareed Amni ayaa tibaaxaya in Kornayl Abdullah Daahir Abdullah (Ugaas Cabdalla) uu masuul ka ahaa howl galkan qorsheysan.
Goobta Duqeyntu ka dhacdey ayaa lasheegey in lagu xanaaneyn jirey curuurta agoonta ah ee da’dooda udhaxeysa 5 ilaa 12 jir waxaana qeyb kamid ah xaruunta cunto loogu karin jirey dadka da`da ah.
goobjoogayaal kusugan degmada saakow oo aan xiriir lasmeyney ayaa sheegaya in xaruunta caafimaadka ee degmada lagu dabiibayo dhaawacyadii waxyeelada kasoo gaartey duqeynta lala beegsadey xaruuntaasi waxeyna intaa ku dareen in Dowada ay gabaabsi tahay.